Rita, Writing for My Sake!: Phyu Phyu Kyaw Thein
Posted by Rita at 2/25/2011 12:00:00 AM
တစ်ချို့ သီချင်းတွေကို သေချာ နားထောင်ကြည့်ပါ။ သူ့လို expression ထည့်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
မိန်းမ အရမ်းဆန်တဲ့ သီချင်းတွေ (Eg. Celine Dion) နဲ့ သိပ်မလိုက်ဖက်လှပါ။
သူက သီချင်းဆိုတာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေလို Entertainment ကိုပါ ထည့်ပြီး သီဆို ဖျော်ဖြေတာဆိုတော့ မျက်စိ နည်းနည်းတော့ စိမ်းတာပေါ့။
Lady Ga Ga ကို မြင်ယောင်ကြည့်ရင် သူ့ကို တော်သေးတယ်လို့ ဆိုဖြစ်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အဆိုတော်ဆိုရင် အသံအား၊ အသံကာလာ၊ ဆိုဟန်၊ ခံစားချက်ကိုပဲ အလေးထားတာပါ။
အတွေးတွေကို မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဂျောက်ဂျက်နှင့် VIP ကဆိုထားတဲ့ သီးချင်းကိုနားထောင်ဘူးပါတယ်၊
အဲ့ဒီထဲမှာ “ဆရာဝန်မကြီးဖြစ်ကြောင်းကြွားတာတို့၊ Power rangerလိုအရောင်တွေချယ် အတောင်တွေပေါက်ပြီးအပေါ်ကဆင်းလာတာတို့၊ သူ့အသံကဘုရားပေးတာ မြန်မာပြည်မှာရှားဆိုပဲ၊ နိုင်ငံခြားအဆိုတော်တွေကိုပဲ အထင်ကြီးတယ်တဲ့၊ နောက်ဆုံးအသားမဲတာနဲ့ သိမ်းလိုက်တာ၊”
သူ့ရဲ့ အမေ သီချင်းလေးကိုတော့ ကြိုက်မိပါသည်။
ဟုတ်လား အဲဒီအကြောင်း မကြားဖူးသေးဘူး။ ကျေးဇူး။
တုံးတယ်ပြောပြော..ခေတ်မမှီဘူးပြောလည်းပြောတော့ ..ဖြူဖြူကျော်သိန်းကိုတော့ မကြိုက်ဘူးးး...သူ့ အသံကြီးကလုပ်သံကြီးလေ..ပုံမှန်အသံမှမဟုတ်တာ...တမင်လုပ်သံကြီးးတကယ်အသံကောင်းတဲ့သူကတင်ဇာမော်တို့ လို...မဒီတို့ လို..မျိုးပေါ့ သူ့ အသံကတော့ တမင်လုပ်ထားတဲ့ အသံမျိုးကြီးးမကြိုက်ဘူးလုံးဝ...
ဟုတ်တယ် ကိုယ်လည်း အသံတော့ ဒီလောက်ကြီး မဟုတ်ဘူး။ မကြိုက်ဘူးလို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။ အတိအကျပြောရရင် သူ့အသံနဲ့ ဆိုဟန်က ကိုယ်ခံစားလို့ရတဲ့ထဲ မပါဘူး။
သူ ရေးတဲ့ ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်လည်း ဖတ်ဖူးတယ်... ဆိုတာ.. ဖြူဖြူကျော်သိန်း ရေး ထားတာကို ပြောတာလား ..မရီတာ..?
ဟုတ်တယ် သူရေးတာ။ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုထဲမှာပါတာ။ ကြိုက်တာ မကြိုက်တာထက် တော်တော် သေသေသပ်သပ်ရေးနိုင်တာတော့ အမှန်ပဲ။
အကြောင်းအရာ သေချာတော့ မမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတယ်။ အမျိုးသားနဲ့ ကွာရှင်းလိုက်တဲ့နေ့က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ feeling ကို ရေးထားတာပါ။
အဲဒါကို ခပ်ငယ်ငယ်က ရေးခဲ့တာလို့ ပြောတယ်။ မဂ္ဂဇင်းမှာပါတာကတော့ သူ အဆိုတော်ဖြစ်ပြီးမှ ပါတာပါ။
ဇတ်ဆရာအလိုကျမှာ “မင်းနဲ့ မှဒို့ သိပ်ချစ်တတ်ခဲ့ ကြင်နာသူယုံထား” ဆိုတဲ့နေရာကို နားထောင်ကြည့်ရင် (အေးချမ်းမေနဲ့ယှဉ်ကြည့်ကြည့် မကြည့်ကြည့်) အဲ့ဒီနေရာက သီချင်းမဟုတ်ဘူး... မရီတာပြောသလို ဂါထာမန္တာန်ရွတ်နေတာနဲ့ထပ်တူကျနေတယ်...
ဖြူဖြူကျော်သိန်း က entertain ဖြစ်တယ် :)
Chemistryဝါသနာပါလို့ Chemist ပဲလုတ်မယ်လို့အမြဲကျုံးဝါးနေတာ
10 တန်းတုန်းက guide အစ်မလည်း ဒီလိုပဲ။ ဒီလိုပဲဆိုတာ chemistry ဝါသနာပါတာကိုပြောတာပါ။ သူကတော့ ဆရာဝန်မလုပ်ဘဲ chemist ပဲ လုပ်မယ်လို့တော့ မပြောဘူး။
ဝင်ခွင့်လျှောက်တော့ (ဆေး) နောက်က ကပ်လျှောက်ပစ်တာ၊ chemistry major.
ကံကောင်းလို့ပေါ့။ တကယ်တမ်း သူ့အမှတ်က မာဂျင်ဖြစ်နေတာကို လုပ်ရက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ chem ဝါသနာက ဆေးကျောင်းတက်တဲ့အခါ အတော်တော့ အထောက်အကူရတယ် ထင်တာပါပဲ။ phys ဝါသနာပါတဲ့လူတွေ engr လိုင်း ယူရင် အဆီအငေါ်တည့်သလိုပေါ့။
အဲဒီအကြောင်းတွေ တကယ်ဆို မေ့နေပြီ။ ခုမှ ပြန်ပေါ်လာတယ်။ =)
သူ့ပထမဆုံးအခွေက သီချင်းတွေက Shakira သီချင်းတွေဆိုတာ မှတ်မိတယ်။ ဟုတ်တယ် Celion Dion သီချင်းတွေထက်စာရင် ခပ်မြူးမြူးသီချင်းတွေနဲ့ ပိုလိုက်တယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ သူ့ကိုကြိုက်တယ်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ မကြိုက်ဘူးလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူလုပ်ချင်ရာလုပ်၊ ၀တ်ချင်ရာဝတ်ပြီး ဟန်ပါပါဆိုနိုင်တာကိုတော့ သဘောကျမိတယ်။
ရီတာပြောမှသိတယ်။ သူရေးတဲ့စာ မဖတ်ဖူးဘူး၊ သီချင်းထက် အဲဒီ့စာကိုပိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီ။
မညိုညိုက ကိုယ့်ရဲ့ဖဘထဲမှာရှိတယ်။း)
ခုပဲ ကိုယ် ဖေ့ဘွတ်ခ် မှာ သွားချောင်းကြည့်လာတယ်။ သူ လက်ထပ်သွားပြီ ထင်တယ်နော်။ ကောင်းလိုက်တာ။ =)
ဖြူဖြူ က အဲ့ဒီ ဝတ္ထု ကို ၈တန်းမှာရေးတာလေ
ဖြူက အရာရာ တဲလန့် ရှိနေတာ
စကားမစပ် ဖြူ့ ဖြူ့ အင်တာဗျူးလေးတခုရှိတယ်
သူပြောတာ မလွန်ဘူး။ မှန်တော့မှန်တယ်။
အသေးစိတ် မမှတ်မိပေမယ့် တော်တော်သေသပ်တာ၊ အတွင်းကျကျ ရှုထောင့်က ရေးနိုင်တာလို့တော့ မှတ်မိနေတယ်။